अर्थ/बजार Archives - Sawal Nepal
काठमाण्डाै – केही दिनयता लगातार घटेको शेयर बजार मङ्गलवार (आज) भने झन्डै ८० अङ्कले बढेको छ । नेप्से आज ७९ दशमलव ४४ अङ्कले बढेर दुई हजार नौ सय १३ दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेको हो । कारोबार भएका सबै समूहको शेयर बढेको छ, बैंकिङ समूहको शेयर ४४ अङ्कले र विकास बैंक समूहको शेयर दुई सय ५१
आज मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । सोमबारको तुलनामा आज सुन प्रतितोला ६०० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार प्रतितोला ९० हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार हुने छ। त्यसैगरी, तेजाबी सुन प्रतितोला ९० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार हुने छ । यस्तै, आज
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । नेपाली बजारमा आज छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ९० हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन अर्थात आइतबार ९० हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो
५१ कम्पनीलाई जोखिम भनेकोबारे सर्वोच्चले धितोपत्र बाेर्डलाई दियो कारण देखाऊ आदेश
नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। गत मंगलबार बोर्डले ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनेर नामै सार्वजनिक गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सो रिटमा सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। बोर्डको कदमविरुद्ध अधिवक्ता रविन बोहजुले रिट दर्ता गराएका थिए। बोर्डले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित
काठमाण्डाै – हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से ६३ अङ्कभन्दा धेरैले घटेको छ । सबै समूहको शेयर ओरालो लागेपछि नेप्से ६३ दशमलव २८ अङ्कले घटेर दुई हजार नौ सय पाँच दशमलव १४ विन्दुमा झरेको छ । आज बैंकिङ समूहको शेयर ३५ दशमलव ४१ अङ्कले घटेको छ । यस्तै व्यापारको ९८ अङ्कले, होटलको ८८, विकास
आज पनि घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सुनको मूल्य घटेको छ । आज नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आजका लागि प्रतितोला ९० हजार रुपैयाँमा कायम भएको जनाएको छ । अघिल्लो दिन ९० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । महासंघले आजका लागि तेजावी
घट्यो सुनको मूल्य, तोलामा कति पुग्यो ?
केही दिन यता नेपाली बजारमा लगातार ओरालो लाग्न थालेको सुनको मूल्य शुक्रबार थप १२ सय रुपैयाँले घट्न पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले घट्दै ९० हजार ८०० रुपैयाँमा झरेको हो । गत बिहीबार एकै दिन ११ सय रुपैयाँले घट्दै सुन प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो
जीवन विकास लघुवित्तलले असार ११ गतेबाट प्राथमिक साधारण सेयर (आईपिओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीको १०० रुपैयाँ अंकित दरका कूल १९ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको १९ लाख ७७ हजार ३०० कित्ता आईपीओ असार ११ गतेबाट निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गर्ने भएको हो । आईपीओको कूल कित्तामध्ये कुल पुँजीको ०.५ प्रतिशतले हुन
निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्न आदेश, बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि एक महिनापछि मात्र
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषेधाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरिवाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो । “कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण
यी ५१ कम्पनीको शेयर लगानी जोखिममा : धिताेपत्र बाेर्ड
काठमाण्डाै – धितोपत्र बाेर्डमा सूचीकृत विभिन्न ५१ वटा कम्पनी तुलनात्मक रूपमा जोखिम रहेको देखिएको छ । धितोपत्र बोर्डले मङ्गलवार विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न ५१ कम्पनी तुलनात्मक रूपमा जोखिम रहेको जानकारी गराएको हो । बोर्डका अनुसार ५१ कम्पनीको सूचीमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, चन्द्रागिरि हिल्स, विशाल बजारलगायत कम्पनी रहेका छन् । शेयर बजार उच्च अङ्कमा पुगेका बेला जोखिम